Afti Tirada Baarlamaanka Talyaaniga Lagu Yareyn Doono Oo Ka Qabsoontay Dalkaas | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Afti Tirada Baarlamaanka Talyaaniga Lagu Yareyn Doono Oo Ka Qabsoontay Dalkaas
Afti Tirada Baarlamaanka Talyaaniga Lagu Yareyn Doono Oo Ka Qabsoontay Dalkaas
Codbixiyeyaasha Talyaaniga ayaa maanta u codeyn doona isbedel lagu sameynayo tirada baarlamaanka dalkaas, si kharash faraha badan ee ku baxa xubnaha baarlamaanka loo yareeyo.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Talyaaniga oo hadda ah 634 mudane ayaa laga soo reebi doonaa 400 oo xildhibaan, halka aqalka sare oo ka kooban 315 laga dhigi doono 200 oo senator.
Ku dhawaad 70% dadka waxay u codeyn doonaan isbedelka lagu sameynayo tirada golayaasha baarlamaanka.
Aftidan waxaa gadaal ka riixeya dhaq dhaqaaqa shanta xidig kuwaas oo qeyb ka ah isbaheysiga talada haya waxaana uu dadweynaha ku boorinayaa in talaabadan ay yareynayso lacagta ku baxda xubnaha baarlamaanka Talyaaniga.
Sidoo kale, waxaa barbar socota doorashada dhowr gobol, iyadoo natiijada ay u muuqato mid dib u dhac ku ah xisbiga midigta fog ee uu hogaamiyo Matteo Salvini halka ay u riyaaqi doonaan xisbiga bidixda dhexe ee ra’iisul wasaare Giuseppe Conte oo ka tirsan isbaheysiga talada haya hadda.
Tirada guud ahaan baarlamaanka labada aqal ee Talyaaniga ayaa hadda ah 945 mudane, waxaana laga dhigi doonaa 600 oo xildhibaan.
Sidoo kale, wax ka bedel ayaa lagu sameyn doonaa dastuurka dalka ka hor doorashada 2023.
Wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Luigi Di Maio, isla markaana kamid ah saraakiisha sar sare ee dhaq dhaqaaqa shanta Xidig, waxaa uu natiijada ku sifeeyay mid taariikhi ah.
October sanadkii hore, dhaq dhaqaaq shanta xidig waxay sheegeen in dalka u soo hari doonto dhaqaale 1bn 10 sano gudahood.
Hogaamiyaha mucaaradda xisbiga midigta fog Matteo Salvini waxaa uu doonayay in uu guul weyn ka soo hoyo doorashadan laakiin waxaa ay u muuqdaan kuwo natiijo wanaagsan ka keenay gobolka bariga ku yaala Marche.
Sidoo kale, xisbiga bidixda dhexe ee dimoqraadiga ah ayaa xukumi doona sadex gobolka oo ay kamid yihiin Tuscany iyo Puglia, musharaxa xisbiga ayaa guushaas ku tilmamay mid aan caadi aheyn.
Gobolka waqooyi bari ee Veneto waxaa guul weyn ka soo hoyay Luca Zaia oo heley 75.9% isagoo ka adkaaday Matteo Salvini.
Afti Tirada Baarlamaanka Talyaaniga Lagu Yareyn Doono Oo Ka Qabsoontay Dalkaas was last modified: September 22nd, 2020 by Admin
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa dalka Hindiya oo dalka dib ugu soo laabtay